Todobada Dal Oo Ku Heshiiyey In La Badbaadiyo Kaymaha Amazon Ee Gubanaya - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaTodobada Dal Oo Ku Heshiiyey In La Badbaadiyo Kaymaha Amazon Ee Gubanaya
Rio de Janeiro (Jigjiga Online) – Toddobo dal oo ku yaal Latin America ayaa wada saxeexday heshiis wax lagaga qabanayo masiibooyinka dabiiciga ah ee ku habsada kaymaha Amazon ee dunida ugu ballaadhan.
Waxaanay dalalkaasi iska kaashan doonaan sida looga falcelin doono masiibooyinka halkaa ka dhaca musqabalka iyo is weydaarsiga sawirada dayax gacmeedyadu qaadaan.
Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru iyo Suriname ayaa heshiiskaa wax ka qabashada masiibooyinka dabiiciga ah ee Kaymaha Amazon kala saxeexday. Waxaanu heshiisku dhigayaa in dhir lagu beero meelaha xaalufay ee kaymahaas ka midka ah.
Gabogabadii shir madaxeedkaa ka dib ayaa madaxweynaha Peru, Martin Vizcarra, uu malaha dareenka ay qabaan dadka u ololeeya daryeelka deegaanka ee Latin Amerika muujiyey markii uu yidhi “niyad wanaag keli ahi badbaado uma aha deegaanka.”
Heshiiska ay gaadheen dawladaha Latin America waxa loola jeedaa in lagu muujiyo sida ay uga go’antahay dalalkaas wax ka qabashada dhibtaada ka dhacday kaymaha Amazon.
Waxay si gaar ah ugu heshiiyeen in la sameeyo shabakad ka hortagta masiibooyinka dabiiciga ah oo weliba isku du’da dedaaladooda mustaqbalka ee lagaga falcelinayo hadii dab mar dambe ka kaco kaymahaas oo haatan ba qaybo ballaadhan oo ka mid ah todobaadadii u dambeeyey dab hulaaqayey.
Waxay sidoo kale ku heshiiyeen in ay isweydaarsadaan wararka gaar ahaan wixii la xidhiidha hawlaha sharci darrada ah ee ka socda kaymaha ee ay ka midka yihiin macdan qodashada aan sharciyeysnayn.
Hase yeeshee dadka dhaliila madaxda dalalkaas weliba gaar ahaan madaxwaynaha Brazil, Jair Bolsonaro, waxay leeyihiin heshiiskaa la gaadhay wax weyn tari maayo haddii aan si buuxda loo dhaqan gelin oo laga horraysiiyo siyaasadaha dalalkaa u gaarka ah oo had iyo goor lid ku ah nuxurka heshiiskan.
Madaxweyne Bolsonaro-ha Brazil iyo Evo Morales-ka Bolivia ayaa dalalkooda iyo dibadaba aad looga dhaliilay markii ay ogolaadeen in kaymahaas Amazon ee dalalkooda macdan laga qoto.
Hase yeeshee madaxweynaha Colombia ee martida loo ahaa ayaa xamaasadda uu u qabo heshiiskani ka muuqatay, “heshiiskani wuu jiri doonaa oo waxa dhaqan galkiisa iska kaashan doona madaxweyneyaasha dalalka nimcada kaymaha Amazon wadaaga” ayuu yidhi Ivan Duque.
Waxa lagu wadaa in ay mar kale madaxdaasi kulmaan ka hor inta aa la gaadhin shir Qaramada Midoobay qaban qaabinayso oo daryeelka Amazon lagaga hadli doono dabayaaqada sannadkan.
Cudurka Kansarka Oo Noqday Dilaa Ay Khaati Ka Taagan Yihiin Dalalka Horumaray